China Expanded Metal Wire mesh mveliso kunye nabathengisi | Ansheng
Umnatha wesinyithi owandisiweyo yinto yentsimbi eyenziwe ngumbumba owandisiweyo wokubetha kunye nokucheba umatshini ukwenza umnatha.
Izinto: Ipleyiti yeAluminiyam, ipleyiti yentsimbi ephantsi, ipleyiti yentsimbi, ipleyiti ye-nickel, ipleyiti yobhedu, ipleyiti yealuminium magnesium, njl.
Ukuluka kunye neempawu: Yenziwe ngokunyathela kunye nokunweba ipleyiti yesinyithi. Umphezulu womnatha uneempawu zokuqina, ukumelana nomhlwa, ukumelana nobushushu obuphezulu, kunye nefuthe lokungenisa umoya.
Iindidi: Ngokwemilo, inokwahlulahlulwa: kuluhlu, iphepha, njl.
Ngokwemathiriyeli, inokwahlulwahlulwa ibe: i-aluminium enemingxuma, intsimbi enemingxuma, intsimbi, umnatha wentsimbi kwalenza, umnatha we-nickel njalo njalo.
Ngokwe-mesh shape, inokwahlulwa-hlulwa ibe: irhombus, isikwere, umngxuma ojikelezayo, umngxuma onamacala amathandathu, umngxunya wentlanzi, iqokobhe lofudo njalo njalo. Iinkcukacha ezizodwa zingenziwa ngokwezifiso.
Unyango Surface: PVC ukutyabeka, eshushu-nkxu galvanizing, electro-galvanizing, anodizing (aluminium ipleyiti), ukutshiza anti-umhlwa ipeyinti, njl
Isicelo:Zonke iimveliso zesinyithi ezandisiweyo ziveliswa kwaye zilungiswa ngobuchwephesha bekhompyuter obuphambili, ngeendlela ezahlukeneyo zomngxunya kunye nolungelelwaniso oluguquguqukayo. Iimveliso zinokunqunyulwa, zigobile, zijikeleze, unyango lomphezulu kunye nolunye uhlengahlengiso olunzulu, oluchanekileyo.
1.Ingasetyenziselwa ukucoca umatshini, amayeza, ukwenza iphepha, ukuhluza, ukhuselo lukazwelonke, umzi mveliso, ulwakhiwo lweenqanawa, umzi mveliso olukiweyo welaphu, ezolimo kunye necandelo elisecaleni, ishishini lezolimo, ishishini le-petrochemical, izixhobo zasekhaya, ezisetyenziselwa ukufaka isilingi, iingcango kunye neefestile ezichasayo ubusela, ipaseji ekhuselekileyo, izinyuko zeepaseji, iitafile nezitulo, iives, iifreyimu ezahlukeneyo zokuthwala iimpahla, iishelfu, njl.
2. Ingasetyenziselwa iiplasta ezinkulu zokutyabeka indawo ezinje ngezakhiwo eziphakamileyo, izindlu zoluntu, iindibano zocweyo, njl. Isetyenziswa njengeplasta yomdongwe ngokubambelela ngokuqinileyo, ukumelana nokuqhekeka, ukumelana nenyikima kunye nezinye izinto. Luhlobo olutsha lwezinto zokwakha zesinyithi kulwakhiwo lwangoku kwaye zinokusetyenziselwa ulwakhiwo lokuqiniswa kweebhulorho zohola wendlela.
3. Ingasetyenziswa njengendawo yokugcina ohola wendlela, uthango lwenkundla, ukhuseleko lokondla ibhanti eluhlaza, isebe lezenzululwazi kwezolimo ukhuseleko kwindawo yovavanyo kunye nokuhlolwa kwesinyithi esincinci.
Ubuninzi (mm) I-SWD (mm) LWD (mm) Umtya (mm) Ububanzi (m) Ubude (m) Ubunzima (kg / m2)
Egqithileyo Umnxeba wocingo
Okulandelayo: Welding wocingo